भारतमा तीन लाख कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए – Sandesh Munch
June 27, 2020 124
नयाँ दिल्ली १३ असार – भारतका स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धनले भारतका कोभिड १९ का सङ्क्रमितहरुमा निको हुने प्रतिशत ५८ रहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– यहाँका कोभिड १९ का सङ्क्रमितहरुमध्ये ५८ प्रतिशतलाई निको भएको छ ।
भारतमा शनिबारसम्ममा कम्तीमा पनि पाँच लाखलाई कोभिड १९ को सङ्क्रमण भएको र तीमध्ये कम्तीमा पनि तीन लाख मानिस निको भएर घर फर्र्किएका छन् । उहाँका अनुसार शनिबारसम्ममा यहाँका करिब तीन लाख सङ्क्रमितलाई निको भएको छ । अरु पनि धेरै जना यसबाट निको भएका र घरजाने अन्तिम तयारीमा रहेका जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
भारतका विभिन्न आठ राज्यका ती नागरिक निको भएर घर फर्किएका छन् । त्यसैगरी भारतमा निधन भएकाहरुमा ८७ प्रतिशत जति तिनै राज्यका नागरिक रहेका पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले भारतमा सङ्क्रमितहरुको मृत्यु दर तीन प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले यहाँ मृत्यु दर जम्मा तीन प्रतिशत छ र यो निकै नै कम हो उहाँले भन्नुभएको थियो । यहाँ पहिलेको तुलनामा दोब्बर हुने दर पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले १९ दिनमा यहाँका सङ्क्रमितको संख्या दोब्बर हुने गरेको जानकारी पनि दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्ने संख्या पनि बढेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यहाँका १ हजार २० प्रयोगशालामा शुक्रबार मात्र २ लाख ३० हजार जनाको परीक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले धरै भन्दा धेरै जनाको कोरोना परीक्षणको व्यवस्था सरकारले मिलाएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
भारतमा शनिबारसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट पाँच लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसैगरी सो सङ्क्रमणबाट १५ हजार जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यहाँ गएको २४ घन्टायतामात्र १८ हजार भन्दा बढी नागरिक सङ्क्रमित भएको भेटिएका छन् । यो एकै दिन सङ्क्रमित भएकाहरुमा सबैभन्दा बढी संख्या हो ।
यहाँ गएका केही दिनयतादेखि हरेक दिन कम्तीमा पनि १४ हजार जना सङ्क्रमित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा यहाँ थपिएका विरामीहरुका कारण भारतको अवस्था भयावह हुने देखिएको पनि बताइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धनले शनिबार कोरोना भाइरसको उपचारका लागि समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै भारतका केन्द्रीय सरकार मन्त्रीहरुसँग भर्चुअल बैठक गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले भारत सरकारले सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयासहरु गरिरहेको बताउनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।(रासस–एएनआई)
Prevस्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : ‘कोरोना जन्तर’ले भाइरस मर्दैन, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ
Nextहेर्नुहोस रोचक खबर आन्तरिक उडान कहिले खुल्छ ?
शरीरको कुन स्थानमा भएको कोठीले शुभ फल दिन्छ ? भिडियोसहित
दुखद समाचार!नयाँ मोटरसाइकल पास गरेर घर फर्कदा दुर्घटना, दाजुभाईको अस्पताल पनि पुग्न नपाई निधन